The 8th Habit-9 | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
The 8th Habit-9	Posted by mm thinker on October 10, 2007
Posted in: Management, Philosophy.	Tagged: Management.	အဋ္ဌမမြောက်အလေ့အထ – ၉
သမိုင်းတင်သည့်ကာလမှစํ အရှေ့တိုင်း၊ အနောက်တိုင်းနှစ်ခုစလုံး၏ ဘာသာတရား၊ ဒဿနပညာတို့ကို လေ့လာလျှင် အခြေခံအားဖြင့် အလားတူခြင်းရာလေးရပ်ကို တွေ့ရပေမည်။ ရုပ်သဘော/ ဥစ္စာဓနရေးရာ (Physical / Economic) ၊ နာမ်သဘော (Mental) ၊ လူမှုဆက်ဆံရေး/ခံစားမှု ဆိုင်ရာ (Social / Emotional) နှင့် ရှင်သန်မှုသဘော (Spiritual) တို့ဖြစ်သည်။ အသုံးအနှုန်း ကွဲကောင်းကွဲမည်ဖြစ်သော်လည်း သဘောတရားအားဖြင့် တူနိုင်ပေသည်။ ယင်းတို့သည် လူသားအားလုံးအဖို့ အခြေခံလိုအပ်ချက်နှင့် တွန်းအားဖြစ်သော ရှင်သန်ရန် Live (Survival)၊ မေတ္တာထားရန် Love (Relationship) ၊ သင်ယူရန် Learn(Growth and Development) နှင့် မျိုးဆက်သစ်အတွက် တစ်ခုခုထားခဲ့ရန် LeaveaLegacy (Meaning and Contribution) တို့ကို ကိုယ်စားပြု သည်။ ကောင်းမြတ်ကျော်စွာ
← National Security Vs Border Economy: The Politics of Border Trade between Thailand and Myanmar	Ethnicity, Identity and Nationalism →	Pages	about